बच्चाहरु को लागि आदर्श पालतू जान्छ कुन - बाट छनौट गर्ने सुझावहरू
बच्चाहरु को लागि एक पालतू जनावर को रूप मा बिल्ली
एक सानो मित्र - हम्सटर
माछा - कांच पछि पाहुना
पक्षी - बच्चाहरु को लागि एक पालतू को रूप मा प्रशंसक मित्रहरु
पालतू जानवरहरूको बारेमा थप पृष्ठहरू
पशुले हाम्रो सन्तानमा सम्भावनात्मक आकर्षण राख्दछ। वर्तमान समय त्यहाँ विभिन्न प्रजातियों को एक किस्म को रूप मा राखी जान सक्छ। प्रत्येक प्रजाति मालिकको लागि फरक आवश्यकताहरू छन्।
बच्चाहरु को लागि आदर्श पालतू जान्छ
यदि बच्चाहरु बच्चाहरु संग एक परिवार को लागि उद्देश्य हो, त्यसैले यो एक निश्चित छनौट गर्न यहाँ छ, किनकि एक बच्चाले अझै जान्न जान्छ कि पशु जनावरहरू उपयुक्त कसरी व्यवहार गर्न। यस कारणका लागि, त्यहाँ जनावरहरू छन् जुन बालबालिकाका लागि उपयुक्त छन् र ती केटाकेटीहरू बच्चाहरूको लागि समस्या हुन सक्छ। प्रजातिहरूमा निर्भर गर्दछ, जानवरहरूको आवश्यकताहरू पूरा गर्न र तिनीहरूलाई राम्रो घर प्रस्ताव गर्न महत्त्वपूर्ण छ। पालतूहरू केवल राम्रो मित्रको छोराछोरीको मतलब मात्र होइन, तर यो कसरी जिम्मेवारीको सामना गर्न बुझ्ने क्षमता पनि हुन सक्छ।
बच्चाका लागि कुन जनावर आदर्श छ? (c) kleinonne.de
मानिसको सबैभन्दा उत्तम मित्र
कुत्तेहरूले पालोको रूपमा उच्च लोकप्रियताको आनन्द लिन्छन्। यो तथ्य एकदमै आश्चर्यचकित छ, कुकुरले यसको साथमा ल्याएको धेरै फाइदाहरू विचार गरिरहेको छ। पहिलो, तथापि, यो सम्झना हुनुपर्छ कि एक साना बच्चाको कुत्ता एक प्लेमेट भन्दा बढी छ, एक पालतू छैन। यस कारणको लागि, यो कुकुर उठाउन सन्तान पर्याप्त हुन्छ परिपक्व हुनु पर्छ। सबै पछि, एक कुकुर मालिकसँग एकै समयमा जिम्मेवारी समावेश छ, किनभने यी जनावरहरू पर्याप्त हेरविचार र समय चाहिन्छ।
यसैले, बच्चाहरु लाई पहिले नै सम्बोधन गर्न एक निश्चित युगमा पुग्नु पर्छ। सबै भन्दा पहिले, प्रश्न एक पिल्ला वा वयस्क कुत्ता बच्चाहरु को लागि राम्रो उपयुक्त छ कि रूपमा उठ्छ। एक कुत्ते पिल्ला पहिलो नजरमा राम्रो छनौट हुन सक्छ, तर एक पिल्लाले पनि थप काम गर्छ। पिट्टेन्सहरू पहिला शिक्षित हुनुपर्दछ, जुन शिक्षामा कुनै गल्ती गर्न को लागी लामो समयसम्म एक कुकुर विद्यालयको नियमित यात्राको आवश्यकता पर्दछ। निस्सन्देह, यो माप पनि लागत संग सम्बन्धित छ।
तथापि कुत्तेको शिक्षा कुकुर विद्यालयको भ्रमणको साथ मात्र समाप्त हुँदैन। विशेष गरी एक पिल्ला व्यायामको साथ फेरि बारम्बारै पर्छ ताकि कुत्ताले व्यक्तिगत आदेशहरू बिर्सनु हुँदैन। प्रारम्भिक दिनमा, प्राय: कुत्तेको साथ हिड्न आवश्यक छ, त्यसैले उसले आफ्नो आवश्यकताहरु गर्न सक्दछ, किनभने यो मुख्य कुकुर हो जसले अझै पनि कमजोर पनीर छ र यसैले अक्सर अगाडिको ढोकामा जान पर्छ। सामान्यतया, कुकुरले बुझ्यो कि त्यो घर मा आफ्नो व्यवसाय गर्न अनुमति छैन जब कुत्ते को ठाउँ को अखबार संग तल्ला को बाहिर को लागि उचित छ कि यो सल्लाह छ। यो पनि एक कुकुर द्वारा सिक्नु पर्छ।
कुत्तेको रूपमा कुकुर?
त्यसैले यो एक दिन धेरै पटक हिड्न र कुत्तेको साथ रातको दौडान हिड्न आवश्यक छ, रातको यात्राको साथमा प्रायः आमाबाबुले लिनु पर्छ। विशेष पिल्ला खाना संग दैनिक फिडिंग बच्चाहरु को उठाना को हेरविचार गर्ने एक अवसर हो। बच्चाहरु लाई युवा कुत्तहरु मा जिम्मेवारी लिन को लागी एक मौका र एक समय को जीवन को लागि एक सही मित्र को खोजने को मौका छ, किनकी कुत्तों संग अन्य पालतू जानवरों को तुलना मा एकदम लंबा जीवन प्रत्याशा छ।
निस्सन्देह यो पहिले नै वयस्क कुत्ता किन्न पनि सम्भव छ। यद्यपि, त्यहाँ यहाँको लागी आवश्यक पर्दछ, किनकि केही जनावरहरूले नयाँ मालिकहरूलाई सही रूपमा स्वीकार गर्दैनन्, त्यसोभए त्यो परिवर्तन गर्न केही प्रशिक्षण आवश्यक पर्दछ। अचम्मको जनावरहरू प्रायः उनीहरूको हेरविचारमा अझ धेरै सजिलो हुन्छ र छोराछोरीको लागि अझ उपयुक्त छ, किनकि उनीहरूले कम प्रयास ल्याए। बच्चाहरु को लागि, कुत्तों विशेष रूप देखि खेल को मामला मा एक राम्रो पालतू हो, किनकी एक कुत्ता को आसपास मूर्खता र विभिन्न गतिविधिहरु को पछि लाग्न सक्छ।
कुकुर छनौट गर्दा सही दाँतमा तिर्नुपर्छ, किनकि केही कुकुरहरू धेरै परिवारको अनुकूल हुन्छन् र यसैले बच्चाहरूसँग एक विशेष परिवारको लागि उपयुक्त विकल्प हो। व्यक्तिगत आकारहरू शरीरको आकार र हेरचाहमा धेरै फरक छन्। यसैले, यो प्रश्न मा कुत्तों को बारे मा अग्रिम को ठेगाना लगाउन को लागि समझदारी गर्दछ र फेरि कुकुर को परिवार को लागि सबै भन्दा राम्रो छ को मूल्यांकन गर्न को लागि। यो निर्णय गर्न, यो सन्तानहरू समावेश गर्न समझदारी बनाउँछ। यसले पहिले नै जिम्मेवारीको दिशामा सानो चरणको अर्थ लिन सक्छ।
कुकुर को अतिरिक्त, बिल्ली एक लोकप्रिय पालतू छ। बिल्लियां अक्सर कुत्तों को तुलना मा पकडने को लागि आसान छ, र यो मुख्य रूप देखि किनकी एक बिल्ली ठूलो मात्रा मा स्वयं को पूरा गर्न सक्छन् र जरूरी नहीं मानव मा निर्भर छैन। यो तथ्य विशेष गरी बाह्य जनावरहरूको लागि सही हो, अर्थात् बिल्लियोंका लागि, जसले बाहिर जान र घर छोड्ने अनुमति दिन्छ।
गोलो केटी आफ्नो बिरालो संग खेलिरहेको छ
तथाकथित घर बिल्लियोंलाई थप हेरविचार चाहिन्छ। एक नियमको रूपमा, एक बिल्ली सन्तुष्ट भएमा यदि दिनहुँ गीला खाना पाउँछ भने र सधैं कटोरीमा सुकेको खाना हो, त्यसैले यो बिरालो सही हो। निस्सन्देह, यो संधै निश्चित हुनुपर्छ कि बिरालो ताज पानी उपलब्ध छ। यो सबै जानवर प्रजातिहरूमा धेरै महत्त्वपूर्ण छ। एक कुत्ते कुत्तेको रूपमा सिकाउन सजिलो छैन, किनकि बिरालोहरू आफ्नै इच्छामा पर्छन् र आफैलाई निर्णय गर्दा बजाउँदा बजाउँदा वा पट्टि बजाउँछन्।
विशेष गरी साना केटाकेटीहरू यहाँ बिस्तारै व्यायाम गर्नुपर्दछ यदि तिनीहरू बिरालो पनि गाह्रो पार्छन्, त्यसोभए यसले चाँडै बच्चाको छालामा सानो स्क्रिनको नेतृत्व गर्न सक्छ। बिल्लीको हेरचाह पनि लिफ्टको बक्सको दैनिक सफाई समावेश गर्दछ। फर फर हेरचाह भन्दा बढी भागको लागि जनावरले लिन्छ। केवल धेरै लामो कोटको प्रजातान्त्रिक संग, यो एक अतिरिक्त कार्य आउन सक्छ, तर यो जानवरहरू बच्चाहरु संग कमैमा राखिएका हुन्छन्, किनकि यो प्रेमी बिल्लियों होइनन्। सबैभन्दा बढी भागको लागि, बिरालो अत्यन्तै उपचारयोग्य पालतू जनावर मानिन्छ, जुन बालबालिकाको लागि आदर्श छ। एक कुत्ते भन्दा कम, कम काम आवश्यक छ, किनकि बिरालोले आफैंलाई नि: शुल्क गिरावटको रूपमा प्रदान गर्न सक्छ। यो एक बिल्ली संग खेल्न पनि सम्भव छ, तर यी मनोरञ्जन क्षण कुत्तों भन्दा फरक छन्। खेलकुद गतिविधिहरू निश्चित हुन सक्छ एक बिरालो सँगै पछ्याउन सक्छ।
ह्यामरटर धेरै मान्छे को विचार मा छ, साना बच्चाहरु को लागि आदर्श पालतू, किनभने यो जनावर जनावरहरु संग कसरी व्यवहार गर्न सिक्न सन्तानहरु को एक आदर्श परिचय प्रदान गर्दछ। ह्यामरले धेरै हेरचाह चाहिन्छ र हेरचाह गर्न सजिलो छ। यद्यपि, हम्सटर निष्पक्ष राख्नको लागि निश्चित जिम्मेवारी चाहिन्छ।
हम्सटर बच्चाहरु को लागि एक पालतू को रूप मा उपयुक्त छ?
पहिलो र प्रमुख, पशु को स्थान महत्त्वपूर्ण छ, किनकी बिल्लियों या कुत्तों को तुलना मा, यो पिंजरे मा हम्सटर को बनाए राखन को अर्थ हो। पिंजराले जनावरको लागि पर्याप्त आकार प्रदान गर्नु पर्छ, ह्यामरलाई पर्याप्त सार्न अनुमति दिन्छ। यद्यपि, बच्चाले कम्तिमा दिनहुँ ह्यामरको पछाडि पक्का सुनिश्चित गर्नु पर्छ। यहाँ यो पनि सम्भव छ कि बच्चाहरु को साना साना मित्रहरुको लागि सानो साहसिक खेल को मैदान बनाउन को लागी मदद को लागी यो भाप को बंद गर्न सक्छन्।
आउटलेट पछि, बच्चालाई पिंजको ढोका ढोका बन्द गरेर सही पार्नुहोस् ताकि ह्यामर पिंजराबाट बाहिर नपुगेको हुन्छ। चूंकि hamsters तटस्थ छैनन्, खेल को घन्टा विशेष गरी साँझ मा उपयुक्त छ। दिनको समयमा, जनावरलाई सुत्न अनुमति दिनु पर्छ। यो विशेष गरी जवान छोराछोरीलाई व्याख्या गर्न सकिन्छ। बच्चाले ह्यामरको साथ निश्चित गर्न पर्छ, कि पशु सधैं ताजा पानी उपलब्ध छ।
पशुलाई खाना दिँदा, यो ध्यान दिनुहोस् कि जनावरहरू फिड भण्डारण संचित गर्न मनपर्छ। यसको अर्थ हम्सटरले घाममा ठाउँलाई खाना लुकाउन सक्दछ र मात्र प्रभाव दिन्छ कि कटोरामा बढी खाना छैन। बच्चालाई खाना खान भन्दा पहिले सावधानीपूर्वक हेरिरहनु पर्छ, यदि कपालमा अझै पनि कुनै पनि खाना छ भने कटोरा भर्नु अघि। तथापि, हम्सटाइजहरू उनीहरूको हल्का कारणले बच्चाहरूमा मात्र लोकप्रिय जनावरहरू छैनन्। एक ह्यामरटर धेरै चाँडै टाँसेको हुन्छ र यसैले जनावरहरू आफ्नो हातमा राख्न सम्भव छ र यसलाई निःशुल्क चलाउन अनुमति दिन्छ। निस्सन्देह, यो केवल पर्यवेक्षण अन्तर्गत हुनुपर्दछ।
ह्यामरटर युवा बच्चाहरु को लागी उपयुक्त शुरुवात जनावर हो। यसको अतिरिक्त, त्यहाँ अन्य रोडेन्टहरू जस्तै गिनी सुँगुर वा खरगोशहरू छन्, जुन उनीहरूका लम्बाईको कारण पनि उपयुक्त बच्चा हुन्।
पहिलो नजरमा, साना बच्चाहरूको लागि माछा उपयुक्त जनावरहरू छैनन्। यसले नजिकको निरीक्षणमा परिवर्तन गर्दैन, किनभने यी जनावरहरू धेरै संवेदनशील प्राणीहरू हुन् जुन विशेष मनोवृत्ति चाहिन्छ। खास गरी सही पानी मूल्यहरूको सन्दर्भमा, बच्चाहरूले गल्ती गर्न सक्छ जुन अन्ततः जनावरहरूको मृत्युको नेतृत्व गर्दछ। यस कारणको लागि, माछाहरू साना बच्चाहरुका लागि सही पाहुना छैनन्।
के तपाईं बच्चाहरूको लागि पाल्तुको रूपमा माछा गर्नुहुन्छ?
अधिक परिपक्व बच्चाहरू, जो पहिले नै जिम्मेवारी लिन सक्दछन्, तिनीहरूले जनावरहरूको आवश्यकता बुझ्न र बुझ्न रूपमा माछाको लागि उपयुक्त छ। जब यो माछा आउछ, मनमा राख्न धेरै कुराहरू छन्। अवलोकन को तहत पानी को मानहरु लाई प्राथमिकता दिइएको छ, किनकि कुन माछा मछलीघर मा राखिएको छ, मानहरु समायोजित हुनु पर्छ। पानी को तापमान पनि एक अनिवार्य भूमिका निभािन्छ।
एक एक्वैरियम को सफाई को एक युवा बच्चा को अपेक्षा नहीं हुनु पर्छ, किनकी यो एक कार्य हो जुन सानो कौशल को आवश्यकता छ र जसमा हेरविचार गर्न को लागी जानन जान्छ कि जानवरहरु को तनाव मा गिरावट न हो। माछालाई खुवाउनु सामान्यतया बालबालिकाको लागि समस्या छैन। सामान्यतया, माछाहरू केवल ठूला छोराछोरीहरूको लागि मात्र मानिन्छ। जवान बच्चाहरु प्राय: एक्वैरियम को नजर मा ऊब लाग्दछन, किनकि माछा जनावरहरू मात्र हेर्छन् र कुनै उद्यम प्रस्ताव गर्न चाहन्छन्। यस प्रकारका जनावरहरू खेल्ने र स्ट्रोक टाढा जान्छ, जुन धेरै अवस्थामा पनि साना बच्चाहरूको रुचिमा लागू हुन्छ।
कुकुर, बिरालो, ह्यामर, माछा वा कम्तिमा पक्षीहरू?
बच्चाहरूको लागि उपयुक्त अर्को पालतू जनावरहरू पक्षी हुन्। रोडेन्टहरू जस्तै, चराहरू पिंजरेमा राखिन्छन्। यद्यपि, यी जनावरहरू पिच वा खेलका लागि कम उपयुक्त छन्। यस कारणका लागि, विशेष गरी साना केटाकेटीहरू एक पादरीको रूपमा पक्षीमा बेवास्ता छन्।
Budgerigars जस्तै पक्षीहरु लाई अत्यन्त लाभकारी साबित भएको छ, विशेष रूप से हेरविचार को शर्त मा, किनकि जनावरहरु को हेरविचार गर्न सजिलो छ। यहाँ, पनि, प्रत्येक दिन पर्याप्त जनावरहरूसँग भोजन र ताजा पानी सुनिश्चित गर्न महत्त्वपूर्ण छ। पिंजराको सफाई पनि महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। यी कार्यहरू छोराछोरीलाई गर्न सजिलो छ र यसैले एक पक्षी यस विचार अन्तर्गत बच्चाहरुको लागि एक उपयुक्त पाल्तु हो।
थुप्रै आमाबाबुले निर्णयको सामना गरिरहेका छन् कि जवान वा अनाथित परिवारले आश्रयबाट परिवारमा समावेश गर्नु पर्दछ कि। आश्रयबाट जनावरहरू प्रायः धेरै संवेदनशील मुद्दा हुन्, किनभने तिनीहरू प्रायः जनावरहरू हुन् जुन नकारात्मक विगतका छन् र उनीहरूको अघिल्लो मालिकहरूसँग खराब अनुभव प्राप्त हुन सक्छ। विशेष गरी यस्ता जनावरहरूसँग दुईजना सोच्नु पर्छ कि तिनीहरू साना बच्चाहरु संग घरघरमा राखिदिनु पर्दछ कि। यसले विशेष गरी कुकुरहरूलाई बुझाउँछ।
बच्चाहरु को लागि एक पालतू जनावर को रूप मा उपयुक्त आश्रय को जानवर हो
निस्सन्देह, पशुहरूलाई पनि आश्रयमा भेटिन्छ, जुन बच्चाहरुका लागि उपयुक्त छ र घरमा पूर्णतया विभिन्न कारणहरू दिइएको थियो। कुत्तों मा, यो पहिले जानवरहरू संग परीक्षण मा केहि दिन लाग्न सम्भव छ। यस तरिका, बच्चाहरु र कुत्तहरु एकदम नजिक आउन सक्छन् र यो आकलन गर्न सजिलो छ कि क्या रसायन उपयुक्त छ। साना जनावरहरू यस सम्बन्धमा असम्बन्धित भागका लागि हुन्।
जनावरको आश्रयको एक जनावरमा थुप्रै अवस्थामा पाइन्छ, किनकि जनावर प्राय: धेरै आभारी हुन्छन् र वफादारी साथीहरू साबित हुन्छन्, जुन विशेष गरी बालबालिकाहरूले पाएका छन्। निस्सन्देह, जनावरहरू परिवारलाई स्वीकार गर्न आफ्नो समय लिनको मौका दिनुपर्छ। यो युवा बालबालिकाको लागि स्पष्ट हुनुपर्छ, ताकि एक साझा जीवन सँगै सम्भव छ। त्यसैले दुवै पक्ष परिचित अवधिको समयमा एकअर्कालाई प्रेम गर्ने मौका छ। आफ्नो घरमा आश्रयबाट एक जना पशु समावेश गर्न न केवल सन्तानहरू आनन्दित हुन सक्छ। जनावरलाई पनि आफ्नै घर, गुरु र फेरि मालफुल गर्न प्रसन्न हुनेछ।
स्थानीय एक्वैरियममा माछा
बच्चाहरु को लागि गोल्डन हम्सटर
एक उचित तरिकामा खरगोश राख्नुहोस्
टट्टू एक जनाको रूपमा
किन जनावरहरू मानिसहरूका लागि महत्त्वपूर्ण छन्?
एक परिवारमा कुकुर र बच्चाहरु
कसले पैसा आविष्कार गर्यो? बच्चाहरु प्रश्न
रंग पृष्ठ बदसूरत डक्लिंग कथा
खरगोशको उचित पालन - पालतू जनावरहरू